घरको छतबाट हाम फा'लेर १७ वर्षे छोरी भागिन्, आमाले रुदैं यसो भनिन (भिडियो सहित) -
Homeसमाचारघरको छतबाट हाम फा’लेर १७ वर्षे छोरी भागिन्, आमाले रुदैं यसो भनिन (भिडियो सहित)
March 28, 2021 admin समाचार 869
एउटा छोरा एउटा छोरी लाग्थ्यो संसारकै भाग्य’मानी अभिभावक लाग्थ्यो आमालाई । जे भन्यो त्य’ही पुरा गर्छु । एउटै छोरी हो उसलाई केही स’मस्या पार्दिन भन्ने सो’चेकी थिइन् आमाले । तर त्यही छोरीले आमाको माया भुले’र एक महिना देखि हरा’इन् । खैरेनीटारकी पवित्रा सुनारले छोरीले यस्तो गर्लिन भन्ने क’ल्पना पनि गरिनन् ।
राती ९ वजे घरको छतवाट भा’गेकी छोरीको खोजी गरिर’हिन् तर छोरी फेला परिनन् । शौचालय पो गइन् की भन्ने लाग्यो, पछि सि’सीटिभी क्यामेरा हेरे तर छोरी (अस्मिता सुनार) हि’डेको देखियो । मोवाइलको सिम पनि फालेको छ । एक जोर कपडा पनि लगेको छैन । १७ वर्षको छोरी क्यामेरा छलेर ढला’नवाट छलेर हिँडेछ, आमा भन्छिन्, भर्खर १० क’क्षामा पढ्दै थिइ ।
प्रहरीलाई ख’बर गर्दा पनि फेला न’परेपछि आमा मिडियाका सह’योगमा आएकी छन् । आफ्नो छोरी अलि विरामी भएका का’रण निकै ख्याल गर्थिन आमाले । छोरी अलि घम’ण्डी हो , आफुले भनेको र माग गरेको कुरा गर्नै पर्ने थियो । आफुले भनेको कुरा पुरा भ’एन भने लुकेर भए पनि पुरा गर्थि, आमा भन्छिन्, साथीहरुले पनि अहिले सम्म छोरीको कसैसंग सम्ब’न्ध थियो भन्ने पनि थाहा नभए’को बताएका छन् ।
उनलाई छोरी वि’वाह गरेर गएकी हो भन्ने लाग्दैन । कतै सम’स्यामा पो परेकी छ की भन्ने ला’गेको उनले बताइन् । हेराउँदा केटासंग गएकी छ भन्छन्, आमा भन्छिन्, त्यो वाहेक छो’रीलाई शंका गर्ने ठाउँ पनि छैन । छोराछोरीको भ’विष्यका लागि भन्दै सारा कुरा भुलेर उनीहरुको खु’सीमा चित्त बुझा’एकी आमाले मन थाम्न सकेकी छैनन् । – इताजा खबरबाट
श्रीमानले श्रीमतीकै कारण म संसार छो’डे, श्रीमतीलाई कारवाही गर्नु भन्दै यस्तो म्यासेज भाईलाइ पठाए (भि’डियो सहित)
February 20, 2021 admin समाचार 2022
झापाको दमकमा फेरी अर्को घटना सा’र्वजनिक भएको छ । पाँचथर फालेलुगंका मन’कुमार राई झापाको दमकका उनी भाडामा बस्दै आएका थिए । श्रीमती सहित दमकमा बस्दै आएका उनले श्रीम’तीले निकै दुख दिएको र अब जि’उन नसक्ने
April 17, 2021 admin समाचार 883
काठमाण्डौंको मध्यवा’नेश्वरमा छ न्यू प्रकृति नर्सरी । नर्सरीमा विभिन्न थरीका फुलका विरुवाहरु पाईन्छ । काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्वर ३१ मध्य’वानेश्वरमा रहेको यो नर्सरी धेरै पुरानो भइसक्यो । ‘अहिले नर्सरीमा एकसय थरीका फुलका वि’रुवाहरु पाईन्छ’ नर्सरीका
November 21, 2020 admin समाचार 3867
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171412)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (165382)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164842)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (164824)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163860)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (162356)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161951)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160409)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (155288)